Ity ny lesoka farany teo amin'ny Twitter izay misy mpampiasa an'arivony | Vaovao IPhone
Tsy dia mifalifaly ny Twitter tato ho ato. Miaraka amin'ny haben'ny mpampiasa izay toa tsy dia ampy loatra amin'ny fotoana mandeha sy torolàlana izay toa tsy hita ny kompàny, ny tambajotra sosialy dia tsy afaka manome slip maro hafa toa an'ity farany ity. Ny orinasa amerikana dia namoaka tamim-pahadisoana ho an'ny mpampiasa iOS rehetra ny fisehoan-javatra vaovao izay mbola tao anatin'ny andrana fanandramana nikatona, izay tsy nahafa-po ny ankamaroan'ny ankamaroany.
Io toetra io dia toetra iray efa noresahina efa ela, ary ilay an'ny esory ny mpampiasa rehefa manao valiny izahay amin'ny bitsika sasany. Amin'izany fomba izany dia somary misafotofoto ihany ny valiny ary mety ho lasa somary sarotra kokoa ny manaraka ny resaka, zavatra iray izay naneho hevitra maro rehefa navoaka tsy nahy ity kinova fitsapana ity.
Ny fahalianana mety ananan'ny Twitter amin'ity karazana hetsika ity dia mazava be: mamela ny bitsika ho madio kokoa ary manala ireo singa hafa amin'ny resaka izay tsy inona fa ny hafatra tianao hampitaina. Na izany aza, maro no mety mieritreritra fa tsy izany no fomba tsara indrindra anaovana azy. Ity lesoka ity Izy io dia misy fiatraikany amin'ireo mpampiasa iOS izay nametraka ny fanavaozana farany ny fangatahana, zavatra izay efa ahitsin'ny orinasa.
Vao tonga tany aminay ilay vaovao hoe Twitter mametraha olona iray izay tsy nampiasa Twitter hiverina hitantana ny iray amin'ireo departemantan'ny orinasa amin'ny maha-tambajotra sosialy - farafaharatsiny, tsy avy amin'ny mombamomba azy ofisialy- izay manome betsaka hieritreretana ny ho avy izay afaka miandry ny tambajotra sosialy. Izaho manokana, amin'ny maha mpampiasa azy hentitra ahy, dia matoky aho fa ho tonga ny fanapahan-kevitra tsara ary ny Twitter dia hahazo ny voninahitr'ilay tambajotra sosialy tsara hatrizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Nofehezin'ny Twitter izany tamin'ny alàlan'ny fanolorana fahadisoana fanovana izay mamafa ny @ mpampiasa amin'ny valiny